Volana Efatra Aty Aoriana, Tsy Mbola Nisy Valiny Mikasika Ny Tifitra Nahafaty Nataon’ny Mpitandro Filaminana Salvadoriana Sy Ny Tafika Ka Nahafatesana Olona Dimy · Global Voices teny Malagasy
Volana Efatra Aty Aoriana, Tsy Mbola Nisy Valiny Mikasika Ny Tifitra Nahafaty Nataon'ny Mpitandro Filaminana Salvadoriana Sy Ny Tafika Ka Nahafatesana Olona Dimy
Voadika ny 17 Desambra 2015 4:54 GMT
Mpikambana iray amin'ny jiolahy mitam-piadiana no voasambotra nandritra ny fikarohana nataon'ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana salvadoriana. Sary: La Prensa/Francisco Alemán, fampiasàna nahazoana alalàna
Nosoratan'i Suchit Chávez sy Ezequiel Barrera ho an'ny La Prensa Gráfica n'i El Salvador ary navoaka tamin'ny tambajotra CONNECTAS ny dika voalohany tamin'ity lahatsoratra ity, noho ny fifanarahana iray momba ny famoahana vontoaty .
Faty dimy hita tao amin'ny trano iray tany Pajales amin'ny faritr'i Panchimalco ao El Salvador. Izany no vokatra azo nandritra ny hetsika niarahan'ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika, ny volana Aogositra tamin'ity taona ity.
Araka ny vaovao ofisialy farany mikasika ireo tranga ireo, nanambatra hery ny mpitandro filaminana sy ireo miaramila mba hanadihady taorian'ny nahatsirihana hetsika nataon’ ny fikambanan-jiolahy teo amin'ilay faritra. Raha vao tonga izy ireo, nambarany fa notsenain'ny tifitra ka niaro tena namaly tifitra. Raha vao afaka ny vovoka, tsy nisy mpitandro filaminana na miaramila maty.
Tratra teo anelanelan'ny fifampitifirana, saingy soa ihany nahay niala mba tsy ho voatifitra, ny lehilahy lehibe iray, ramatoa iray, ary tanora telo renimpianakaviana niaraka tamin'ireo zanany: vavikely roa taona ny iray ary lahikely efa-taona.Telo andro taorian'ny fitifirana, nanjavona ny iray tamin'ireo vehivavy tanora.
Io no vaovao ofisialy mikasika ireo tranga, saingy tsy io irery no hany fitantaràna ny zavatra nitranga. Araka ny voalazan'ny renin'ny iray tamin'ireo fianakaviana teo:
Rehefa tafiditra ireo miaramila, teo aorian'ireo lehilahy, tsy nisy olona navelan'izy hiala teo. Voahidy tao an'efitra iray hafa aho, niantsoantso azy ireo mba hamela ireo zanako vavy sy ireo zafikeliko hiala.
Camila, tovovavy iray ao anatin'ny faha-roapolo taonany ary mipetraka ao amin'ilay trano koa, no milaza fa raha ny marina, dimy lahy nitàna fiadiana no tao antrano , saingy milaza izy fa napetrak'izy ireo teo amin'ny tany ny fitaovam-piadiany rehefa nahare ireo zaza nitomany ry zareo. Araka ny voalazan'i Camila, rehefa niala ny fitaovam-piadiana, nesorina tao amin'ny efitrano izay niafenany ireo lehilahy ireo ary nalefa tao amin'ny tokotany kely iray izay toerana fametrahan'ny ankohonana ireo biby fiompiny. Voalaza ho nahankin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo miaramila tamin'ny rindrina izy ireo ary norarafany bala, nialohan'ny nitaritarihany ny fatiny hiditra tao an-trano. (Io karazana tranga io no afaka hanazava hoe nahoana no feno rà nandriaka manerana ny tokotany, nefa tsy nahitàna faty).
Ny harivan'ny 19 Aogositra, telo andro taorian'ny zava-niseho, tsy hita i Camila rehefa iny hody avy niasa iny.
Ny andro nahalalàna'ny rehefa ny fahafatesan'ireo dimy mpikambana tao amin'ilay andian-jiolahy, nanomboka niely eran'ny media sosialy ireo sary mampihoron-koditra. Manamafy ireo mpitati-baovao fa mifanaraka tsara amin'ny trano notsidihan'izy ireo ny toerana izay nakàna sary ireo faty. Ireo fitafiana hita ihany koa mifanaraka amin'ny antsipirihany mikasika ireo fitsirihana matihanina tamin'ireo razana dimy, nataon'ny Ivontoerana Momba Ny Fitsirihana Medikaly Araka ny Lalàna.
Araka ny tatitra mikasika ny fitsirihana ny razàna, matin'ny bala dimy i Luis Benítez, iray tamin'ireo mpikambana tamin'ilay andian-jiolahy.Voan'ny bala telo fara-fahakeliny manakaiky ny soroka havia ary roa hafa teo amin'ny tratrany. Tamin'ireo faritra roa ireo, araka ny fizahàn'ny mpitsabo, nahitàna “faritra betsaka feno vovoka fanaovana tombokavatsa”, mitranga io rehefa akaiky loatra ny fipoahan'ny basy ka tafiditra lalina ao anaty hoditra ny vovoky ny bala (eo amin'ny elanelana tsy mihoatra ny 1.5 metatra, na faladiha dimy).
Teo ampanadihadiana ireo sary sy teo amin'ny fampitahana ny fitsirihana ny razana, maro ireo tambajotra no nanontany hoe ahoana no nahatonga ireo vatana mangatsiaka ho teo amin'ny toerana nisy azy, tao anaty faritra kely nandritra ny fitifirana. Ahoana no tsy nisy naratra ireo olona fito hafa tao anaty tranobe nandritra ny fifampitifirana? Ary ahoana ireo mpitandro filaminana sy ireo miaramila no nitifitra tao anatin'ilay trano nisy ireo zaza roa nanatrika teo (izay voalaza fa nidradradradra nitomany).
Voatifitra im-balo ilay antitra indrindra niharam-boina, Miguel Benítez Jorge. Ny iray tamin'ireo bala nitsofoka tao amin'ny havokavony havanana, rehefa avy nandalo ny lamosiny sady nandrotika ny tratrany. Raha vao voatifitra tokoa i Benítez Jorge ary, araka ny filazàna ofisialy, maty raha vao nifandona tamin'ny mpitandro filaminana, nahoana no avy any andamosina izy no voatifitra? Ary koa, raha voatifitra avy ao andamosina izy, ahoana no nahitàna azy nitsilàny amin'ny lamosina? Tao amin'ireo sary, sahala amin'ny toa nisy basy teny amin'i Benítez Jorge.
Tamin'ny resaka ho an'ny mpampahalala vaovao ny 27 Aogositra, David Munguía Payés, minisitry ny fiarovana, nanamafy fa eo ampanatanterahana fanadihadiana anatiny ny Tafika, tahaka ny fenitra mahazatra izorana rehefa misy ny fifampitifirana nataon'ireo miaramila. Milaza i Payés fa mbola tsy naharay ny dika farany amin'ny tatitra anefa izy, ary koa tsy afaka mitondra tsoakevitra. “Saingy raha ny marina, ny zava-nitranga rehetra dia manondro avokoa hoe [ny mpitandro ny filaminana sy ny tafika] nanatanteraka andraikitra nifanaraka tamin'ny lalàna,” hoy izy manizingizina.
Araka i David Morales, mpisolovava mpiaro zon'olombelona, “hatramin'ny taona ela lasa, lazaina fa betsaka ireo fifandonana nisy teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo mpanao heloka bevava, ny maro tamin'ireo dia nifarana tamin'ny fahafatesan'ireo izay voalaza ho mpanao heloka bevava, tsy nahitana ratra misongadina nanjo ireo mpitandro filaminana”:
Nanamarika izahay fa tsy nisy fijerena matotra mikasika ireny fomba fanao ireny. Aminay tahaka ny misy loza hoe nitondra ho amin'ny famonoana fahatany ireny hetsika ireny.
Tsindrio ny sary eo ambany raha hamaky io lahatsoratra io amin'ny teny Espanola.